‘Covid19 Naannawa Finfinneetti weerara lafaafi ijaarsa seeraan alaa hammeesse’ jedhu jiraattonni - Kichuu
HomeAfaan OromooNews‘Covid19 Naannawa Finfinneetti weerara lafaafi ijaarsa seeraan alaa hammeesse’ jedhu jiraattonni
Koroonaavaayiras: ‘Covid19 Naannawa Finfinneetti weerara lafaafi ijaarsa seeraan alaa hammeesse’ jedhu jiraattonni
(bbcafaanoromoo)—Magaalaa Finfinnee fi lafa magaalattii daangessee jiru weerara lafaa fi ijaarsi seeraan alaa yaaddoo guddaa uumuu erga eegalee bubbuleera.
Magaalli Finfinnees yeroo adda addaatti ijaarsawwan kanneen diiguu jalqabee dhiisa. Bara darbes Bulchiisi Magaalaa Finfinnee ijaarsa seeraan alaa naannawa magaalattiitti mul’atu bifa duulaatiin tarkaanfii irratti fudhachuuf guyyaa beellamaa muratee achumaan hafe.
Tibba kanas keessumaa erga dhibeen koronaavaayirasii ajandaa ijoo biyyaa fi addunyaa ta’ee duulli lafa Oromoo naannawa Finfinnee weeraruu kuni bifa haaraan eegalameera jedhu jiraattonni.
Jiraataa magaalaa Finfinnee kan tahanii fi dhimma kana itti dhiheenyan hordofaa jiraachuu kan himan Obbo Taammiruu Nagaraa, Koronaavaayirasiin lafa Oromoo warra weeraruuf hawwaa tureef carraa gaarii uumeera jedha.
“Erga dhibeen kuni dhufee namni baayyeen gara manaatti deebi’eera, caasaan mootummaatis duula dhibee kana ittisuu irratti fuulleefataniiru.
Haala mijataa kana fayyadamuudhaan namoonni kaanimmoo bifa ijaarameen saamicha lafaa irratti bobba’aniiru,” jedhan.
Weerarri lafaa kuni lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti hammatamee fi duwwaa taa’aa ture irrattis osoo hin hafin ijaaramaa jira jedhu.
“Kutaa bulchiinsa kolfee Qaraaniyoo aanaa shanaffaa qaxanaan 7 fi 8 weerara akka maleetu gaggeefamaa jira.
Gaafan qaaman naannoo sana ilaalu waan amanuufuu nama rakkisutu ta’aa jira,” jedhan.
Ijaarsi taasifamaa jiru kunis jigiidhaan ta’uu fi halkan qofa osoo hin taane guyyaas ifumatti mana pilastikaan ijaaraa jiraachuu himu.
“Jalqaba pilaastika naannessaa mana kan ijaaran. Torban tokko yeroo turummoo karaa keessaatiin muka dhaabanii dhoqqeedhaan ijaaru,” jedhan.
Adeemsi amma Naannawa Finfinneetti tahaa jiru kuni haala amma jiruun itti fufnaan yaaddoo cimaa Lafa Oromiyaa irratti uumuu akka malus dubbatan.
‘…manneen tibba kana ijaaraman 300 ni caalu’
Iddoo weerarri lafaa itti adeemsifamaa jiru kan jiraatuu fi nageenya isaatiif eenyummaa isaa ibsuu kan hin barbaanne namni BBC’n dubbise kan biraas, ta’iin ammaa kuni waan amma duraarraa adda jedhu.
“Garmalee qindaa’ameeti kan ijaaramaa jiru. Harki caalaan pilaastikaan kan ijaaramedha.
Bakka ani amma ilaalaa jiru kanatti qofa manneen tibba kana ijaaraman 300 ni caalu.
Namoonni kana hojjetan rakkoo mana jireenyaa qofas osoo hin taane dhimmi siyaasaas jiraachuu akka hin oolle nan shakka,” jedhan.
Ijaarsi kuni yeroo mootummaan diiguuf jedhu waca kaasuun hiikaa siyaasaa akka argatu gochuudhaan bakkichumatti hafuun waan baratameef, carraan amma isaan argatan kuni ofitti amanamummaadhaan akka ijaarratan taasiseeras jedhu.
Gocha kana ammatti dhaabsisuu baannaan booda sirreessuun rakkoo jabaa uumuu akka malus yaaddoodhaan himu namni kuni.
Lafti amma ijaarsi irratti ijaaramaa jiru kuni bittaadhaan osoo hin taane lafuma qonnaan bulaa kan ture, duwwaa waanuma taa’uuf qofa weeraruutu mul’achaa jiras jedhan.
Weerarri lafaa Koronaavaayirasii daheefatee taasifamu kuni naannawa magaalaa Finfinnee bakka hedduutti mul’achaa jira kan jedhan jiraattonni kunneen gochi kuni egeree lafaa fi siyaasa Oromoo irratti rakkoo hamaa fiduu akka malu eeru.
Mootummaanis dhibee yaaddoo ta’e janarratti qofa fuullefachuun warra seeran alaatiif karra banaa dhiisuurra dhimma kanas akka xiyyeeffannaan hordofee seera qabsiisuufis gaafataniiru.
Deebii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Hogganaa Itti aanaan Biiroo Bulchiinsaa fi Itti Fayyadamma Lafa Baadiyyaa oromiyaa Obbo Baayyisaa Badhaadhaa, gochi weerara lafaa Koronaavaayirasii daheeffatee taasifamu kana eeruu argachuu himuun, dhimmicha hordofuu jalqabneerra jedhu.
“Weeraraa fi alseerummaa lafaa naannawa Finfinnee kana eeruu argannee jirra. Xiyyeeffannaa addaatiin ilaalamuu akka qabus irratti waliigallee koree hundeessinee gara naannawa kanaatti bobbaasaa jirra,” jedhan.
Erga dhibeen Koronaavaayirasii kuni dhufee duulli gara sanaan taasifamu mul’achuu eeruunis akka hin ijaarre ittisuu fi kanneen ijaaraman diiguu irratti mootummaan araarri mul’isu hin jiraatu jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa baaseen, gochi weerara lafaa naannawa magaalotaatti dhibee Koronaavaayirasii kana daheefachuudhaan taasifamaa jiru hataattamaan akka dhaabbatuufi kanneen gocha kana keessatti hirmaatan irrattis tarkaanfii akka fudhatu beeksiseera.